Topic: ဆရာဝန်တွေ, ဆေးခန်း, အာမခံ
တစ် ဦး smear ပြီးနောက် smear ဆီးသွားစဉ်နာကျင်မှုအမျိုးသားများသင်ဆဲတောင်တက်၏အဆုံးအပေါ်တစ် ဦး tripper ချိတ်ဆက်။ ကုသရန်လိုအပ်သည် အဆိုပါရှိရာသို့အလျင်အမြန်ပိုကောင်း။ Ketorol နေစဉ်နာကျင်မှု။ ဒီဟာကဘယ်လိုလဲ။ ဒါငါ့ရဲ့ပထမဆုံးပဲ ...
echocardiography နှင့်နှလုံး dopplerography ခြားနားချက်ကဘာလဲ? Doppler ultrasonography သည် ဦး နှောက်သွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ရေးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝြေခင်းနှင့်မောခြင်း၏အကြောင်းရင်းများကိုမကြာခဏရှာဖွေလေ့ရှိသည်။
နာတာရှည်ရောဂါဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ နာတာရှည်ရောဂါများနှင့်သေခြင်းများကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ မည်သူမဆိုရှောင်ရှားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်သက်ရှိတစ်ခုတည်း၌သင်လုပ်နိုင်သည်။
မိန်းကလေးများသည် microflora ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရာတွင်လိင်အင်္ဂါ၏ယဉ်ကျေးမှုရလဒ် - မိုက်ခရိုလာရာကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါ။ ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ ဘာမှမ ဝမ်းရောဂါ။ သစ်ပင်ပန်းမန်ဖြစ်သင့်သည်။ နှင့်လည်း leukocytes ။ microflora မရှိခြင်းသည်မကောင်းသောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောနေရာမဖြစ်သင့်ပါ
ကျေးဇူးပြုပြီးသွားဆရာဝန်ကတာတာမာဖယ်ရှားပစ်ပုံကိုပြောပြပါ ဦး ။ ဘယ်လောက်ကြာ၊ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ? နာပါသလား မကြောက်ပါနဲ့။ အရာအားလုံး CHOCOLATE လိမ့်မည်။ jackhammer)))) သာ။ ကောင်း၏လေဆာ။ အဲဒါသူတို့ကိုမနာပါဘူး။
မီးယပ်နှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်း။ Corpus luteum ဆိုတာဘာလဲ။ မင်းဒီမှာဖတ်နိုင်တယ်။ အဆိုပါ corpus luteum အဲဒီမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်! The corpus luteum Ovary ၏ corpus luteum (lat ။ Corpus luteum) သည်ယာယီအတွင်းပိုင်းဂလင်းဖြစ်သည်။
မော်စကိုတွင်မှဲ့ဖယ်ရှားပစ်ရန်အဘယ်မှာရှိ? အမည်, လိပ်စာ, ရှိပါက - အဆက်အသွယ်။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ!
မော်စကိုတွင် moles ဖယ်ရှားပစ်ရန်အဘယ်မှာရှိ? အမည်, လိပ်စာ, ရှိပါက - အဆက်အသွယ်။ ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ! nevi (moles) ကိုမဖယ်ရှားမီဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ ဒါကအရေပြားအထူးကုဆရာဝန်ပါ။ အရေပြားခွဲစိတ်မှုဆေးခန်း ၁၊
Krasnoyarsk မှာဘယ်နိမ့်ဆုံးကိုသွားရမလဲပြောပြလို့ရမလား။ သူတို့ကပြောင်းရွှေ့, သူတို့မရှိ။ Krasnoyarsk နယ်မြေ၏ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကူးစက်ရောဂါသက်သာချောင်ချိရေးဖောင်ဒေးရှင်း (FSEB)၊ အနည်းဆုံး Krasnoyarsk, Semapornaya, 413 Tel ။ : +7 (391) 201-58-59 (သန့်ရှင်းမှုအနည်းဆုံး) ...
CH P ES ကိုနှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကခန့်အပ်သည်။ : - ဤစာမေးပွဲကိုမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သို့ပြုလုပ်သည်ကိုစစ်ဆေးခြင်းအတွက်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် transesophageal pacing (TEE) ကိုအသုံးပြုသည်။
မှတ်ပုံတင်သည့်နေရာတွင်မဟုတ်ဘဲဆေးခန်းတစ်ခုတွင်ဖျားနာခွင့်ရနိုင်ပါသလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ အာမခံလက်မှတ်ရှိခြင်းနှင့်ဆေးခန်းအတော်များများအတွက်အခိုင်အမာယုံကြည်မှုရှိခြင်း (ဒါကသူတို့အလုပ်မဟုတ်ဟုသူတို့ယုံကြည်သည်) တစ်ခုခုရယူပါ ...
endoscopic ခွဲစိတ်မှုဆိုတာဘာလဲ၊ ဒါက laproscopy နဲ့ဘယ်လိုကွာခြားသလဲ။ အဆိုပါ ureter အတွက်ကျောက်။ Endoscopic - ခွဲစိတ်မှုလုံးဝမရှိပဲ urethroscope သည်ကျောက်တုံးသို့ရောက်ပြီးဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ Laparoscopic ပြီးသား ...
ဓာတုဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အလင်းဖြည့်ခြင်းဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဓာတုဗေဒအားပါးစပ်အခေါင်းပေါက်၊ အလင်း၌အချိန်အတန်ကြာဓာတုဗေဒဆေးကုသမှုခံယူသည်။ heliolamp နှင့်ဓါတ်ပြုပြီးမှသာဓာတုဗေဒတံဆိပ်သည်ငါးပိ + ငါးပိပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၊
မော်စကိုတွင်ပြန်လည်ကုသမှုခံယူရန်ဆေးခန်းကိုအကြံပေးပါ အကယ်၍ သင်ပြန်လည်ကုသမှုခံယူလိုပါကအကောင်းဆုံးအဖြေမှာ V.I.Dikul (Dikul ဆေးခန်း) ၏ညွှန်ကြားမှုအောက်ရှိ Losiny Ostrov ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ မော်စကိုတွင်သွားဆေးခန်းကောင်းတစ်ခုပေးပါ။ တစ်ခုရှိတယ် ၎င်းကို Trident South ဟုခေါ်သည်။ Starokachalovskaya လမ်း ၆ လမ်းရှိ Blue Bird လူနေအဆောက်အအုံ (မြောက်ပိုင်း Butovo) တွင်တည်ရှိသည်။
အဆစ်ကိုထိခိုက်လျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ ကုသရန်လိုအပ်သည်ကိုစတင်ရန်ဆရာ ၀ န်မှစစ်ဆေးရမည်။ အကြောင်းပြချက်များမှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်သည် - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းမှအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်း၊
မည်သည့်ကိစ္စများတွင်သရဖူဆောင်းထားသနည်း။ သွား၏အထက်ပိုင်းတစ်ဝက်ကျိုးသွားသောအခါသူတို့သည်ငါ၏ပဉ္စမသွားတွင် (သတ္တုကြွေထည်များကိုသတ္တုကြွေပြားများ) တင်သည်။ သူတို့ကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကကြာရှည်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်
ယောက်ျားများ၊ ကျွန်တော့်ကိုပြောပြပါ၊ ကျွန်တော် solcoseryl ဆီမွှေးကိုဆေးသေတ္တာထဲမှာဘာတွေ၊ ငိုဒဏ်ရာများနှင့်အပူလောင်ခြင်းမှ solcoseryl ။ ကောင်းတဲ့အရာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါကဤဂျယ်လ်ကိုဒုတိယအရေပြား (Solcoseryl) ဟုခေါ်သည်။ တစ်သျှူးသစ်များပြန်လည်ထူထောင်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသောဆီမွှေးဖြစ်သည်။
ကျွန်မခင်ပွန်းကအသည်းခြောက်ခြင်းကန ဦး အဆင့်ရှိပြီး ALT 192, AST 214, လွန်ခဲ့သောတစ်လကနိမ့်ကျနေတယ်၊ ​​ဆက်ပြီးဆက်တိုးနေ ဦး မလား၊ အသဲအသည်းခြောက်တာအတွက်ဘ ၀ ကိုဘယ်လိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသလဲ။ အများအားဖြင့်အသည်းခြောက်ခြင်းအတွက်ဟောကိန်း ...
Diuresis ဆိုတာဘာလဲ ကျန်းမာသူတစ် ဦး တွင်ဆီးမည်မျှထုတ်လွှတ်သင့်ကြောင်းနှင့်လူနာမည်မျှရှိသင့်သနည်း။ နေ့စဉ်ဆီးထွက်နှုန်း (ဆီးထွက်မှု) သည်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျား၊ မ၊ အရွယ်၊ အရေအတွက် ...
ကျွန်တော့်ကိုမော်စကိုရှိဆီးလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကောင်းကောင်းစင်တာကိုပြောပြပါ !! ကြိုတင် ATP http://www.uro.ru/ ဖက်ဒရယ်ပြည်နယ် Institution မှသိပ္ပံသုတေသနသိပ္ပံ Rosmedtechnologies ၏ရုရှားသိပ္ပံနှင့်စမ်းသပ်, အတိုင်းအတာများနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ urological စင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးလမ်းကြောင်းသုတေသနဌာနသည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
77 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 1,018 စက္ကန့်ကျော် Generate ။